June 22, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (Garoowe)-Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa ka bilowday Raaf xooggan oo lagu ururinayo ariga ku dayacan suuqyada, xaafadaha iyo dhammaan waddooyinka ay magaaladu ka kooban tahay.
Howlgalkaan oo ay fulinayaan ciidanka ammaanka Puntland ayaa waxaa dabada ka riixaysa dowladda hoose ee magaalada Garoowe oo muddooyinkii ugu dambeeyey cabasho ka muujinaysa dhibaatada arigu magaalada ku hayo iyo tacadiyada uu qudhiisu la kulmo.
Duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse ayaa sheegay in la qaadi doono dhammaan ariga derbi wareegga ah ee magaalada Garoowe loona hayn doono cidkasta oo awoodi wayda inay xeraysato arigeeda maalintiina u foof geyso banaanka magaalada.
Ariga oo gawaari waaweyn looga daabulay magaalada Garoowe ayaa waxaa lagu ururiyey xeryo ay dowladda hoose ka samaysay goobo magaalada ka baxsan oo lagu siin doono calaf looguna diyaariyey shaqaale gacanta ku hayn doona.
War raaf waxaa loo isticmalaa marka dad la qaqabanasyo,ee xoolah ku nool magaalooyinka,waxaa jira nidaam iyo shuruuc u yaal oo lago maamulo haddii,magaalada lago sii daayo.
Maaglooyinka waxa ay geeyean xeryo lago hayo inta dadkii lahaa u imanayaan,dabadeedna wixii sharci agmh er dowlada vhoose u yaal baa ,la mariyaa,sida digniin ama ganaax lacageed.
Intay dawlada raafayso ariga may raafto shabaabka aad xooga ugu leh puntlaan iyo Eelayda shabaabku adeegsado?
In uu ari magaalada dhex joogo aad baa looga fiican yahay.Laakiin waxaa wax ka qabad u baahan dambiilayaasha shabaabkaa iyo kuway adeegsadaan.
Puntland waxaa laga sugaayey ineey wax ka qabto dhulka puntland ka maqan ee sool iyo sanaag , ciidankii waxaa lagu mashquuliyey ineey magaalada garoowe kula dagaalamaan ariga,